Pianakaviana any Inde: Ny vehivavy no mahatonga ny asa - adihevitra - FAZ
Pianakaviana any Inde: Ny vehivavy no mahatonga ny asa — adihevitra — FAZ
Ny fianakaviana lehibe ny g-tafika Ankehitriny fitaomana. Sy ny ao an-tanàn-dehibe napetraka endrika vaovao ny fiainana: ny vehivavy Tokan-tena. hatramin’ny fiandohan’ny volana aprily zavatra reny mahandro sakafo atoandro indray efatra kilao ny ovy ho roa ambin ny folo-doha ny fianakaviana. RTLII dia mampiseho ny vanim-potoana vaovao ny»XXL adventure fianakaviana lehibe». Ny iray amby fitopolo sy valo ny lehilahy, ny vehivavy ary ny ankizy manisa ny fokon’ny ny lohan’ny fianakaviana Beimann mipetraka amin’ny toeram-Pambolena, zato sy telo-polo ireo ao amin ny trano. Mba aharetan’ny indray mandeha isan’andro mba hihinana miara, ny fianakaviana, dia ny Maxim ny fianakaviambe lehiben’ny Beimann. Ary toy izany koa ny vehivavy ity Indian super hanendasany fianakaviana lehibe-isan’andro enina ambin’ny folo zato flatbreads, atsatsiho Himalayan legioma tendrombohitra sy ny hanaitra: sloshing ny fiafaran ny curry sy ny lasopy. Ny olona miaiky, na izany aza, fa ny Rafitra miasa afa-tsy raha mitandrina ny vehivavy eo ambany fanaraha-maso. Olana azo ialàna amin’ny misafidy ny am-polony manambady lahy vady tsy mihoatra ny dimy ny folo taona, amin’ny ambany ny fanabeazana. Isika India, ny tanora, ny fianakaviana amin’ny ankizy maro lehibe sy ao amin’ny fianakaviana faribolana ny tsara foana Taloha fialonana. Fara-fahakeliny isan-jato ny Indiana zokiolona manana ankizy. Ampahany kely ihany ny an’arivony tapitrisa ny olona monina ao amin’ny iray amin’ireo arivo trano nandritra ny taona, Bayern mbola manana dia manana trano fitaizana be antitra. Amin’ny dimy ambin’ny folo taona izahay Eoropeana manana eo ho eo ny faha-dimy amby efa-polo tonga ny Shinoa nahatratra mankalaza ny telopolo-fahafito fitsingerenan’ny andro nahaterahany, ny Indiana isaina, fa madio, dia sivy amby roapolo Lenze. Ny tombony taona ity tombony dia, na izany aza, afa-tsy raha India mahomby, ny tanora ny Mety raha ny marina dia nivelatra. Ao ny miroborobo Indiana toe-karena, dia nitaraina efa ho ny antsasaky araka ny talenta ny tsy fahampian’ny, indrindra fa eo anivon ny injeniera, ny mpitantana sy ny tsara ofana, dia tsy mahay ny mpiasa. Angamba tokony hifindra monina. Angamba tsy izany. Azo antoka ny Indiana fianakaviana tambajotra dia lehibe kokoa noho ny antsika, fa dia tsy mifandray voatery mirindra. Ny Indiana omena ny fianakaviana, ny hery centrifugal ny Ankehitriny fitaomana. Satria ny Ny fifindra-monina ny Arayas ao ny faharoa dia ny fanjakana arivo taona B. C. ny Tsodranon, patrilineal ho nandova»Mpiray Fianakaviana», ao ny lohany sy ny vadiny, ny zanany lahy sy ny vadin’izy ireo, sy ireo zafikeliny, ary tsy manam-bady ny zafikeliny, fiainantsika, miampy mpikambana ao amin’ny mpiasa, ny fianakaviana modely ao India. Izaho mino ny Mpiray Fianakaviana: Ny fianakaviana dia ny kely indrindra amin’ny vondrona sosialy lamba, fa tsy ny olona. Mba tsy nizarazara ny fananana, satria, mazava ho azy, ny fizakana ny tany, izay mijanona miaraka taorian ‘ny fahafatesan’ ny ray ao amin ny fianakaviana, ny rahalahy, ny fianakaviana ary, indraindray, ny zokiny Indrindra dia ny tena vaovao ambony. Dia tonga ny fisarahana amin’ny fianakaviana, lazaina fa ny Fisainana ao amin’ny tsipelina ny maha-danja mazava ho azy fa ho rahalahy harmony, ny tsiny matetika ny»ra-tsy fantatra»ny vadiny. Na dia ny vehivavy maty vady lohany ny iray, toy ny fianakaviambe, ny tompovavy, na ny renibeny, tampoka mety ho toy ny vahiny ny vatana ary araka izany, dia nanomboka nahatsapa. Izany dia ny hoe mba tsy ao anatin’ny fianakaviana ny laharana avo omena, izany dia mampiseho anao mandritra ny fivahiniana masina any amin’ny tanàna Masina (rehefa dinihina tokoa, dia miaraka mivantana fiheverana ny antoka) mba ho Faty. Irery ao Varanasi an’aliny ny mpitondratena miandry ny fahafatesana. Vehivavy vola be dia be ny fotoana sy ny vola ao ny fiofanana. Na izany aza raha vao ny ankizy no misy, maro ao amin’ny ampaham — potoana sy handray ny mety ny fisotroan-dronono tahiry. Nahoana no toy izany. Wernher von Braun dia heverina ho toy ny endrika mamirapiratra ireo ny balafomanga, izay ny Amerikana nanidina dimam-polo taona lasa izay, ny ny volana. Fa vao ny fanombohana ny asa ny ny angano ny ray ny toerana mandeha amin’ny fisalasalana. Ao Berlin, maro ny tanora amin’ny teny arabo burly ny olona hijoro eo anoloan’ny fitsarana. Tokony efa nangalatra ny efatra tapitrisa dolara ny volamena vola madinika avy amin’ny Fambara-tranom-Bakoka. Ny nalaza ratsy Fianakaviambe ela. Ny mpikambana ao amin’ny Bundestag Frank Magnat efa nanafika amin’ny roa-by-efatra mba hampiely ny AfD araka ny zava-misy. Izao namoaka lahatsary noraisim-peo na inona na inona mba ho hita. Ny fanaovan-gazety mpikaroka ao amin’ny Oniversiten’i Mainz, ny fitaterana amin’ny fitarihana ny fampahalalam-baovao, anisan’izany ny F. A. Z, ARD sy ny NSA, ny krizy, mpitsoa-ponenana, ary nianatra. Ny fitadiavana no mifangaro. Ny Ministeran’ny fitantanam-Bola voamarina fa ny voalohany, fa ho sedraina amin’ny teny alemà Banky sy ny Commerzbank ny stratejika safidy. Ireo adihevitra momba ny mety hatao, voalaza ao amin’ny Taratasy izay efa nanaiky ny F.
Ao amin’ny Bavarian tanàna Miesbach, amin’ny raharahan-loza dia nanambara. Mponina ao an-toerana Petra Gerling nilaza tamin’ny Dinika afa-tsy ny toe-draharaha, nivaingana amin’ny kodiarana fiara sy ny diso tafahoatra ny lohatenim-baovao. Misaotra noho ny liana amin’ny F. A. Z.
Anao ho raisintsika any amin’ny minitra vitsy amin’ny E-Mail mba hanamarina ny Gazety mba. Ny fianakaviana tambajotra any India dia lehibe kokoa noho ny antsika ihany, fa tsy foto-kevitra mirindra. Ny fianakaviana lehibe ny g-tafika Ankehitriny fitaomana
← Chatroulette Zygoma - Poana Webcam Karajia Amin'ny Aterineto
Ny fiainana mpiara-miasa tsy misy fisoratana anarana, tsy misy fisoratana anarana, sy ny fandaniana →